News Collection: जनसेनाका कमाण्डर को कतातिर?
जनसेनाका कमाण्डर को कतातिर?
काठमाडौं । 'हामी क्रान्तिका लागि जनमुक्ति सेना भएका हौं, क्रान्तिमा तलमाथि भए बन्दुकको नाल तपार्इंतिरै फर्किने छ ' तीन नम्बर डिभिजनका एक कमाण्डर रविन्द्रले प्रचण्डतर्फ इंगित गर्दै आक्रोश प्रट गरेका थिए। त्यही आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिपछि एमाओवादी कार्यकर्ताले नेतृत्वप्रति कसरी खबरदारी गरे भन्ने आँकलन गर्न थालिएको छ। यो अभिव्यक्ति बाहिर आएपछि एनेकपा माओवादीका जनसेनाले छैटांै विस्तारित बैठकमा राखेको मन्तव्य चर्चाको विषय बनेको छ। एमाओवादी सेना अध्यक्ष प्रचण्डको एकलौटी पक्षमा छन् भन्ने आम बुझाई पनि यसले गलत प्रमाणित गरिदिएको छ। डिभिजन कमाण्डर तथा सहायक कमाण्डरहरु विभाजित रुपमा विस्तारित बैठकमा सहभागी भएका थिए।
अझ रोचक कुरा त २०६५ सालको खरिपाटी भेलामा एकलौटी रुपमा प्रचण्डको पक्षमा उभिएका सेना अहिले अधिकांश पार्टी नेतृत्वको विपक्षमा उभिए। सहभागीले दिएको जानकारी अनुसार प्रचण्डको पक्षमा बोल्नेले पनि पार्टी बिग्रिएको र गुट उपगुट सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए। नेताहरुको जीवनशैलीप्रति आक्रोशित हुँदै लालसेनाले नेताहरुले हामीलाई अहिले यो के नाटक देखाउन बोलाएको भन्दै आक्रोस पोखेको पनि बैठकमा सहभागीले बताएका छन्। त्यसरी अभिव्यक्ति राख्ने क्रममा डिभिजन कमाण्डरहरु भने सबै प्रचण्डको पक्षमा देखिए भने डिभिजन सहायक कमाण्डर भने किरणको पक्षमा उभिएका थिए। एमाओवादीका सात डिभिजनमध्ये दोस्रो डिभिजनमा मात्रै प्रचण्डको एकल पकड देखियो। डेपुटी कमाण्डरहरु बर्षमान पुन, नन्दकिशोर पुन, जनार्दन शर्मा र चन्द्रप्रकाश खनाल सबै प्रचण्डको पक्षमा थिए। र, उनीहरुले हरेक डिभिजनमा प्रचण्डको पक्षमा बोल्न दबाब दिएका थिए। कतिसम्म भने कतिपय जनसेनाका कमाण्डरले भने आफ्ना श्रीमतीलाई पनि किरणको पक्षमा नलाग्न र लागे सम्बन्धविच्छेद गर्नेसम्मको धम्की आएको थियो। तर, विस्तारित बैठकमा सहभागीका अनुसार किरणको पक्षमा भने सोचेभन्दा बढी जनसेना देखिएका थिए। बाबुरामको पक्षमा पनि केही सहभागी जनसेना देखिएपछि प्रचण्डका लागि थप टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। जनसेनाभित्र बाबुराम संधैं अनुदार नेताका रुपमा चिनिन्थे। हरेक पटक प्रचण्डको पक्षमा देखिने जनसेनाभित्र तीन धार देखिएपछि प्रचण्ड प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी पनि गर्न थालिएको छ। सहभागीका अनुसार पहिलोे डिभिजनबाट प्रचण्डको पक्षमा डिभिजन कमाण्डर यामबहादुर अधिकारी प्रतिक्षा, किरणको पक्षमा बिग्रेड कमाण्डर विवस राई र बाबुरामको पक्षमा हरिबहादुर श्रेष्ठले बोलेका थिए। त्यसैगरी दोस्रो डिभिजनबाट भने प्रचण्डको पक्षमा मात्रै थिए। त्यहाँ सुकबहादुर रोका डिभिजन कमाण्डर छन्। यता, तेस्रो डिभिजनमा भने प्रचण्डको पक्षमा प्रदीप तामाङ बिग्रेड कमाण्डर, डिभिजन सहायक कमाण्डर उदयबहादुर चलाउने र भट्टराईको पक्षमा बटालियन कमाण्डर श्रवण रहेका थिए। चौथो डिभिजनबाट ब्रिगेड कमाण्डर सुरेश पहाडी प्रचण्डको पक्षमा थिए भने किरणको पक्षमा डिभिजन सहायक कमाण्डर वासुदेव घिमिरे र भट्टराईको पक्षमा डम्बर ठकुरी बटालियन कमाण्डर रहेका थिए भने पाँचांै डिभिजनका निमित्त कमाण्डर राजबहादुर बुढा प्रचण्डको पक्षमा थिए भने डिभिजन सहायक कमाण्डर रामलाल रोका किरणको पक्षमा थिए। यस डिभिजनमा भट्टराईको पक्ष कोही पनि नरहेको कुरा एक सहभागीले साँघुलाई बताए। त्यसैगरी छैटौं डिभिजनबाट डिभिजन कमाण्डर प्रचण्डको पक्षमा थिए भने किरणको पक्षमा डिभिजन सहायक कमाण्डर विवेक कुवँर उभिएका थिए। र, यहाँ पनि बाबुरामको पक्षमा केही खुलेनन्। र, सातौं डिभिजनबाट डिभिजन सहायक कमाण्डर जीवन बुढा प्रचण्डको पक्षमा थिए भने ब्रिगेड कमाण्डर हिमाल किरण र बटालियन कमाण्डर संघर्ष बाबुरामको पक्षमा थिए। माओवादी सेना मुख्यालयबाट भने वीरेन्द्र बुढा डिभिजन सहायक कमाण्डरसहित सबै प्रचण्डको पक्षमा देखिए।